Nezvedu -Shanghai Yangkai Electronics Co., Ltd.
Tine simba rekugadzira kugona uye tinogadzira anopfuura zviuru gumi mamodheru. Tinogona kupa izere renongedzo yezvinhu zviri kure zvekutonga zvigadzirwa, yepakutanga kure kudzora, kwepasirese kure kudzora uye OEM kure kudzora. Mune ruzivo, zvigadzirwa zvine infrared remote control, yebhuruu-zino remote control, Wi-Fi remote control pamwe neremote control yemhepo conditioner.
Isu gore rega rega tinotengesa maminioni seti yekure kure kune EU, North America, South America, Australia uye Southeast yeAsia.
Independent R & D uye hunotsigirwa utsanzi kutiita kuenda mberi. Mumakore apfuura isu takashandisa akawanda patents anosanganisira patent yekugadzira, patent yekushandisa modhi uye chitarisiko patent.
Zvinoenderana nekusimbiswa kwakasimba kwemhando yepamusoro, hunyanzvi hwetekinoroji, kugadzirisa kushanda zvakanaka, basa rakanakisa, tinovavarira kuve mumwe wevatambi vepamusoro muindasitiri yepasi rese yekudzora indaneti uye nekugadzira kukosha kwakakwira kune vese vatengi vedu.
Yakagadziriswa saizi uye maumbirwo aripo. Tikugashirei kugovana pfungwa dzenyu nesu, ngatishandei pamwechete kuti hupenyu huwedzere kugadzira.